Galmudug Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka keebaa xilka laga qaaday? – Madal Furan
Hoy > Warka > Galmudug Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka keebaa xilka laga qaaday?
Galmudug Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka keebaa xilka laga qaaday?
Cadaado (Madal Furan) – Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa beeniyey xil ka qaadis ay ku sameeyeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka maamulka Galmudug kuwaasoo shirk u yeeshay.
Xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa soo saaray war ay ku sheegayaan inay xilkii ka qaadeen Madaxweyne Xaaf, iyadoo uu shirgudoominayey Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir.
Haseyeeshee, Madaxweyne Xaaf ayaa warkaas ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, wuxuuna sheegay inaysan Xildhibaanadu ku sugneyd magaaladda Cadaado, Cali Gacalna xilka laga qaaday maalmo ka hor uusana aheyn Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
“Xildhibaano meesha ma joogaan waa 9 xildhibaan iyo mid uu isagu yiri nin tagay buu badalayaa oo uu maanta dhaariyay marka waxaasi waa wax iska fowda ah,” ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Cali Gacal ayaa sheegay in 47 xildhibaan ay u codeysay mooshin laga qaaday Axmed Ducaale Xaaf, sidaasna xilkii looga qaaday.
Xil ka qaadista Madaxweyne Xaaf ee Golaha Wakiiladu u adeegsadeen ayaa aad uga yar ridada Xildhibaanadii Khamiistii la soo dhaafay xilka ka qaaday Cali Gacal Casir, waxaase uu hadda xaalka u muuqdaa midi midi ku taag.
Maamulka Galmudug ayay muuqataa inuu luqunta la galay khilaaf siyaasadeed oo sababi kara burbur siyaasadeed.
mana aha markii ugu horeysay ee khilaafka caynkan oo kale ahi uu ka dhex dilaaco Golayaasha dowladda Maamulka Galmudug, balse waa la xaliyey, wuxuuna khilaafkani ku soo beegmay xili Madaxweynaha Galmudug Mudane. Axmed Ducaale Xaaf uu ka mid noqday Hogaamiyayaasha Gobolada ee sida weyn ugaga soo horjeensaday siyaasadda Xukuumadda DFS.
Daawo:- Madaxda Maamulada Gobolada oo ka qayb galaya maalinta Qaranimada dalka Turkiga